Archdiocese of Mandalay blog: February 2014
မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာနှင့် ဘုရင်ဂျီရွာကြီးများ (နောက်ဆုံးအပိုင်း)
င်္Fr.Paul Zinghtung Grawng
ဖါသာရ်ပေါလ် ဇိန်ထုန်းဂရောင်သည် (၁၉၃၉)ခု မတ်လ (၂၀)ရက်နေ့တွင် ဗန်းမော်ခရိုင် မန်စီမြို့နယ် လုံခပ်ရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ ဦးဇိန်ထုန်းဂန်နှင့် ဒေါ်လဇုမ်ထုတို့ဖြစ်သည်။
စတုတ္ထတန်းအောင်သည် အထိ ဗန်းမော်မြို့ စိန်ကော်လန်ဘန်ကျောင်းတွင် ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၅၃)ခု မေလ (၅)ရက်နေ့တွင် မေမြို့ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၅၇)ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသော တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲကို စိန်အဲလ်ဘက် အထက်တန်းကျောင်းမှ ၀င်ရောက်ဖြေဆိုရာ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် (၁၉၅၇)ခုနှစ် မှ (၁၉၅၈) မတ်လ အထိ မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် လက်တင်စာ တနှစ်သင်ကြားခဲ့သည်။
(၁၉၅၈) ခု မတ်လ (၁၅)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ် မေဂျာဆေမီနာရီသို့ ၀င်ရောက်၍ ရဟန်းတို့ တတ်အပ်သော ပညာရပ်များကို ဂျေဇွိတ်အထိကများ ထံမှ (၁၉၆၅)ခု မတ်လ(ရ)ရက်နေ့ အထိ သင်ယူခဲ့သည်။ (၁၉၆၅)ခု မတ်လ (၂၇)ရက်နေ့တွင် ဗန်းမော်မြို့၌ ဆရာတော် ဂျွန်ဟောင်းလက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် မိုးမောက်မြို့တွင် လက်ထောက်အဖြစ်နှင့် သာသနာအမှုတော်ကို ထမ်းရွက်ခဲ့သည်။ (၁၉၆၆) ခု မတ်လမှ (၁၉၆၈) ခုနှစ် မတ်လအထိ ဗန်းမော်မြို့ ဘော်ဒါကျောင်းတွင် (၂)နှစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
(၁၉၆၈) ခုနှစ် မေလမှ (၁၉၇၄)ခုနှစ် မတ်လအထိ ရန်ကုန်မြို့ မေဂျာ ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်တွင် ၀ိညာဉ်လမ်းညွှန် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၇၄)ခုနှစ် မတ်လမှ (၁၉၇၆)ခု ဧပြီလအထိ မြစ်ကြီးနားတွင် ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် (၂)နှစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
(၁၉၇၆) ခု ဧပြီလ (၃)ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ ဆရာတော်သိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ (၁၉၇၇)ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် မြစ်ကြီးနား ကက်သလစ်သာသနာကို တာဝန်ယူ အုပ်ချုပ်ရန် ဆရာတော်ဂျွန်ဟောင်းမှ တာဝန် လွဲအပ်ခဲ့သည်။ (၂၀၀၃)ခုနှစ် မေလ (၂၄)ရက်နေ့တွင် မန္တလေး ကက်သလစ် သာသနာဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ကြောင်း ရောမမြို့ ဗါတီကန်မှ ကြေငြာသည်။ (၂၀၀၃)ခုနှစ် ဂျွန်လ (၁၄)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာ၏ တာဝန်များကို ဆရာတော်ချားလ်စ်ဘိုထံမှ ရဟန်းမင်းကြီး ကိုယ်စားလှယ် ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော် Adriano Bernardini ရှေ့မှောက်တွင် လွဲပြောင်း ယူခဲ့သည်။
င်္Fr. Hubert U Win Nyo
ဖါသာရ် ဦးဝင်းညိုသည် (၁၉၆၉)ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၇)ရက်နေ့တွင် ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ ရွာတော်ရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးစတီဗင်းနှင့် ရိုဇားဒေါ်တင်ရီတို့ ဖြစ်သည်။ စတုတ္ထတန်း အောင်မြင်သည်အထိ ရွာတော်ရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ၅တန်းနှင့်
၆တန်းကို ပရံရွာ တွဲဘက်အလယ်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားပြီး (၁၉၈၄)ခုနှစ်တွင် မေမြို့ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်သည်။ မေမြို့ အမှတ်(၃)အထက်တန်းကျောင်းတွင် (၇)တန်းမှ (၁၀)တန်းအထိ ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၉၁)ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်း အောင်ခဲ့သည်။
(၁၉၉၁)မှ (၁၉၉၇)ခုနှစ် အထိ မန္တလေးမြို့ စိန်သောမတ်စ်အကြို ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်တွင် ဆက်လက် ပညာဆည်းပူးခဲ့သည်။ (၁၉၉၇)ခုနှစ်မှ (၁၉၉၉)ခုနှစ် အထိ မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် ဒဿနိကဗေဒ ပညာရပ်ကို သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၉) ခုမှ (၂၀၀၃) ခုနှစ် အထိ ရန်ကုန် မေဂျာရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် သီအိုလိုဂျီ ပညာ ဆက်လက်သင်ကြားခဲ့ပြီးနောက် (၂၀၀၃) ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက်နေ့တွင် ရေဦးမြို့၌ ဦးပဉ္စင်းကြီး သိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ (၂၀၀၃)ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၄)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ်တွင် ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော် ပေါလ်ဇိန်တုန်းဂရောင် လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် ဟံလင်းနှင့် ကံကြီးတော ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုရသည်။
Fr.William U Win Kyaw
ဖါသာရ် ဦးဝင်းကျော်သည် (၁၉၇၂)ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးကျော်သောင်း ဒေါ်လူစီတို့ ဖြစ်သည်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့ အမှတ် (၁) မူလတန်းကျောင်းတွင် (၄)တန်းအောင်သည် အထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ၅တန်း မှ ၆တန်းအထိ ပြင်ဦးလွင် အထက(၁)တွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ၇တန်းမှ ၈တန်းအထိ လားရှိုး အ.လ.က(၄)တွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားပြီးနောက် (၁၉၈၉)ခု မေလတွင် စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းဝင်သည်။ ၉တန်းနှင့် ၁၀တန်းကို မေမြို့ အမှတ်(၃)အ.ထ.က တွင် ဆက်လက် ပညာ သင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၉၂)ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၂) မှ (၁၉၉၇)ခုနှစ်အထိ မန္တလေးမြို့ စိန်သောမတ်အကြို ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၇)တွင် သိပ္ပံဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။
(၁၉၉၇) မှ (၁၉၉၉) အထိ မေမြို့် ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်တွင် ဒသနိက ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၉) ခုနှစ်မှ (၂၀၀၃)ခုနှစ် အထိ ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်တွင် သီအိုလိုဂျီပညာ ဆက်လက်သင်ကြားခဲ့ပြီးနောက် (၂၀၀၃)ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက်နေ့တွင် ရေဦးမြို့၌ ဦးပဉ္စင်းကြီး သိက္ခာခံယူခဲ့သည်။ (၂၀၀၃)ခု ဒီဇင်ဘာလ (၁၄)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ်၌ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် ပေါလ်ဇိန်ထုန်းဂရောင် လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် ချမ်းသာရွာ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုရသည်။
င်္Fr. Denis U Min Zaw
ဖါသာရ်ဒင်းနစ် ဦးမင်းဇော်သည် (၁၉၇၂)ခုနှစ် မေလ (၁၅)ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်း ၀ါးခယ်မမြို့နယ် ကနစိုးကုန်းကျေး၇ွာတွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ မန်းစတီးနှင့် ဒေါ်ခင်စန်းတို့ဖြစ်သည်။ မွေးချင်း (၇)ယောက်အနက် အကြီးဆုံး သားကြီးဖြစ်သည်။ မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်း ပညာရပ်များကို ကနစိုးကုန်းကျေးရွာ အလယ်တန်းကျောင်းတွင် (၁၉၇၇)ခုနှစ်မှ (၁၉၈၈)အထိ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၈၉)တွင် ပုသိမ်-မရမ်းချောင်း ရွှေနှလုံးတော် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုကျောင်းတွင် (၁၉၈၉)ခုနှစ်မှ (၁၉၉၇)ခုနှစ်အထိ ရဟန်းဖြစ် အခြေခံပညာရပ်များ သင်ကြားရင်း (၁၉၉၄)ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်း စာမေးပွဲ အောင်မြင်ခဲ့သည်။
ထိုနောက် မေမြို့ ပြင်ဦးလွင် ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်တွင် (၁၉၉၇)ခုနှစ်မှ (၁၉၉၈)ခုနှစ်အထိ ပညာ ဆက်လက် သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၉)ခုနှစ်မှ (၂၀၀၂)ခုနှစ် အထိ ရန်ကုန်မေဂျာရဟန်းဖြစ် တက္ကသိုလ်တွင် ရဟန်းတို့ တတ်အပ်သော ပညာရပ်များ ဆည်းပူး လေ့လာ သင်ကြား အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၂)ခုနှစ်တွင် မိဖများနေထိုင်ရာ ကနစိုးကုန်းကျေးရွာတွင် မိသားစုနှင့်အတူ ပြန်လည်နေထိုင်ရင်း မိသားစုဘ၀ တသက်တာ လေ့လာခဲ့ရသည်။ (၂၀၀၂)ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၂)ရက်နေ့တွင် ဦးပဉ္စင်းကြီးသိက္ခာ ခံယူပြီး (၂၀၀၃) ခုနှစ် မတ်လ(၂၃)ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်ကက်သလစ် သာသနာ အကူ လက်ထောက်ဆရာတော်ကြီး ဂျွန်မန်းဆိန်းတို့၏ လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူပြီးနောက် မန္တလေးမြို့ စိန်ဇေးဗီးယားအုပ်စုတွင် လက်ထောက် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည်။
ဖါသာရ် ဘရူးနိူးသည် (၁၉၇၃)ခု ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၇)ရက်နေ့တွင် အိမ်မဲမြို့နယ် ငုချောင်းကျေးရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးချစ်ပု ခေါ် ဦးစိန်မောင် ဒေါ်မှတ်တင်တို့ဖြစ်သည်။ အသက် (၆)နှစ်အရွယ်မှ စ၍ ငုချောင်းရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင် စတုတ္ထတန်းအောင်သည် အထိ ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၅) တန်းမှ (၈)တန်းအထိ ၀ါးတလုတ် ကမ်းနေ အလယ်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၉)တန်းနှင့် (၁၀)တန်းကို မြောင်းမြမြို့ အမှတ်(၃) အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၉၄) ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်းအောင်ပြီး မရမ်းချောင်း ရဟန်းဖြစ်ကျောင်းတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၆) မှ (၁၉၉၈) အထိ မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်တွင် ဖီလော်ဆော်ဖီ ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၈)ခုနှစ်မှ (၂၀၀၂) အထိ ရန်ကုန် မေဂျာ ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်တွင် သီအိုလိုဂျီပညာ သင်ကြားတတ်မြောက်ပြီးနောက် (၂၀၀၃)ခုနှစ် မတ်လ (၂၃)ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်မြို့၌ ဆရာတော်မန်းဆိန်ဟှီ လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် မေမြို့ စိန်အာလောရှက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် ၀ိညာဉ်လမ်းညွှန်အဖြစ် အမှုထမ်းရသည်။
ဖါသာရ်ဂျွန်သည် (၁၉၇၁)ခုနှစ် ဂျွန်လ (၁၂)ရက်နေ့တွင် မြောင်းမြမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဘများမှာ ဦးအောင်ကျော်ငွေနှင့်ဒေါ်အေးငွေ တို့ဖြစ်သည် အသက် (၆)နှစ်အရွယ် မြောင်းမြမြို့ အမှတ် (၃)အထက်တန်းကျောင်းတွင် သူငယ်တန်းမှ စ၍ ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၉၄)ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်း အောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၄)ခုနှစ်မှ (၁၉၉၆)အထိ မရမ်းချောင်း ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
(၁၉၉၆) ခုနှစ်မှ (၁၉၉၈)ခုနှစ် အထိ မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်တွင် ဖီလော်ဆော်ဖီပညာရပ် သင်ကြားခဲ့ပြီး (၁၉၉၈) ခုနစ်မှ (၂၀၀၂) အထိ ရန်ကုန် မေဂျာရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် သီအိုလိုဂျီပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၂၀၀၃)ခုနှစ် မတ်လ (၂၃)ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်မြို့၏ ဆရာတော် ဂျွန်မန်းဆိန်ဟှီ လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။
ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူပြီးနောက် မေလ(၁၅)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ စိန်ဂျိုးဇက် လဖုန်းကျောင်းတွင် (၃) ပါတ်၊ အမရပူရတွင် တစ်ပါတ်၊ ဆရာတော်ကြီးကျောင်းတိုက်တွင် ဇွန်လ (၁၅)ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလအထိ နေထိုင်ခဲ့ပြီး (၂၀၀၄)ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှ စ၍ ကျောက်ဆည်မြို့နယ် ဆင်ဖြူရွာတွင် တာဝန်ခံ ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် အမှုထမ်းရသည်။
ဖါသာရ် ဟင်နရီ စိန်ကိုကို(ပုသိမ်သာသနာ)
Fr. Henary Sein Ko Ko
ဖါသာရ် ဟင်နရီစိန်ကိုကိုသည် (၁၉၇၄)ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်း ၀ါးခယ်မမြို့နယ်၊ ကနစိုကုန်းကျေးရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ မန်းစပိန့် ဒေါ်မန်အကျုံနှင့် ဂါမူနန်းတို့ဖြစ်သည်။ မွေးချင်း (၁၁)ယောက်အနက် အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ မူလတန်းနှင့် အလယ်တန်းပညာရပ်များကို ကနစိုကုန်း ကျေးရွာ အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်းတွင် တက်ရောက်
သင်ကြား အောင်မြင်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၁)ခုနှစ်တွင် ပုသိမ်-မရမ်းချောင်း ရွှေနှလုံးတော် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုကျောင်းတွင် (၁၉၉၁)ခုနှစ်မှ (၁၉၉၆)ခုနှစ် အထိ ရဟန်းဖြစ် အခြေခံပညာရပ်များ သင်ကြားရင်း (၁၉၉၅)ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်း စာမေးပွဲ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် မေမြို့(ပြင်ဦးလွင်) ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် (၁၉၉၆)ခုနှစ်မှ (၁၉၉၈)ခုနှစ် အထိ ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၉)ခုနှစ်မှ (၂၀၀၂)ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန်မြို့ မေဂျာ ရဟန်း ဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် ရဟန်းတို့တတ်အပ်သော ပညာရပ်များ သင်ကြား အောင်မြင်ခဲ့သည်။ (၂၀၀၂) ခုနှစ်တွင် မိဘများနေထိုင်ရာ ကနစိုကုန်း ကျေးရွာတွင် မိသားစုနှင့် အတူပြန်လည်နေထိုင်ရင်း မိသားစုဘ၀တသက်တာကို လေ့လာခဲ့ရပါသည်။ (၂၀၀၂) ခု အောက်တိုဘာလ (၂၂)ရက်နေ့တွင် ဦးပဉ္စင်းကြီး သိက္ခာခံယူပြီး (၂၀၀၃)ခု မတ်လ (၂၃)ရက်နေ့တွင် ပုသိမ် ကက်သလစ်သာသနာ အကူ လက်ထောက် ဆရာတော်ကြီး ဂျွန်မန်းဆိန်ဟှီး လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် မန္တလေးမြို့ စိန်သောမတ်စ်အကြို ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည်။
Fr. Christopher U Win Naing
ဖါသာရ်ခရစ္စတိုဖါ ဦးဝင်းနိုင်သည် ဧရာဝတီတိုင်း လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ရှားတောကျေးရွာတွင် (၁၉၇၃)ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ ဦးမောင်နုနှင့် ဒေါ်မွှေးတို့ဖြစ်သည်။ ရှားတောကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင် စတုတ္ထတန်းအောင်သည် အထိ သင်ကြားခဲ့သည်။ အလယ်တန်းပညာကို ပန်းတောကြီးကျေးရွာတွင် သင်ကြားခဲ့ပြီး အထက်တန်းပညာကို ဟင်္သာတမြို့ အိုင်သပြုကျောင်းတွင် သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၃) ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်း အောင်သည်။
(၁၉၉၃) ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၁)ရက်နေ့တွင် ပုသိမ် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်ရောက်၍ ပညာသင်ကြားသည်။ (၂၀၀၂)ခုနှစ် အောက်တိုဘါလ(၂၇)ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်၌ ဦးပဉ္စင်းကြီးသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ (၂၀၀၃)ခုနှစ် မတ်လ (၂၃)ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်မြို့၌ ဆရာတော်ကြီး ဂျွန်မန်းဆိန်းဟှီလက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ သိက္ခာခံယူပြီးနောက် မန္တလေးသာသနာ၊ မြစ်ငယ်နှင့် မြောက်ကိုင်း ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုရသည်။
င်္Fr. Joachim U Shwe Phone
ဖါသာရ်ဂျော်ကင်း ဦးရွှေဖုန်းသည် (၁၉၇၂)ခု မတ်လ (၁၅)ရက်နေ့တွင် မေရီလန်း၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဂျူးလီးယက် အမောင်နှင့် ကင်ဒီဒါကျင်ရွှေတို့ဖြစ်သည်။ (၁၉၉၄)ခု ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နေ့မှ (၁၉၉၆)ခု ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့အထိ ပုသိမ် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် ပညာသင် ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၆)ခု မေလ (၁၆)မှ (၁၉၉၈)ခု မတ်လ (၁၆)ရက်နေ့အထိ မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် ဒဿနိက ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၈)ခု မေလ (၁၆)ရက်မှ (၂၀၀၂)ခု မတ်လ (၁၆)ရက်အထိ ရန်ကုန် မေဂျာရဟန်းဖြစ် တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး၊ (၂၀၀၂) ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၇)ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်မြို့ စိန်ပီတာ ကာသီဒရယ်ကျောင်းတွင် ဦးပဉ္စင်းကြီး သိက္ခာခံယူခဲ့သည်။ (၂၀၀၃)ခုနှစ် မတ်လ (၂၃)ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်မြို့၌ ဆရာတော်ကြီး မန်းဆိန်းဟှီလက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် မန္တလေးသာသနာ ရေဦးမြို့တွင် သာသနာ အမှုတော်ကို ထမ်းဆောင်ရသည်။
Fr. Isidore Sowal
ဖါသာရ် အီင်္စီဒို စောအယ်သည် ၁၉၇၅-ခု မတ်လ ၂၂-ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်သာသနာ မေရီလန်းတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၉၉၁-ခု မေလ (၁၅) ရက်မှ ၁၉၉၆ ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့အထိ ပုသိမ် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၉၆-ခု မေလ (၁၆)ရက်မှ (၁၉၉၈) မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့အထိ ပြင်ဦးလွင် ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် ဖီလော်ဆော်ဖီပညာ သင်ကြားပြီး (၁၉၉၈)ခု မေလ (၁၆)ရက်မှ ၂၀၀၂-ခုနှစ် မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန်မြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ် မေဂျာဆေမီနာရီတွင် ပညာ ဆက်လက်သင်ကြားခဲ့သည်။ ၂၀၀၂-ခု အောက်တိုဘာလ (၂၇)ရက်နေ့တွင် ဦးပဉ္စင်းကြီး သိက္ခာရခဲ့သည်။ ၂၀၀၃-ခုနှစ် မတ်လ (၂၃)ရက်နေ့တွင် ပုသိမ်မြို့၌ ဆရာတော်ကြီး ဂျွန်မန်းဆိန်းဟှီလက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူပြီးနောက် မန္တလေးသာသနာ ရွှေဘိုနယ်တွင် အမှုထမ်းရသည်။
ခင်မြကြူ-ဒေါက်တာ ကုန်းဘောင်ခေတ်ပြင်သစ်မြန်မာဆက်ဆံရေး သမိုင်း
မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ အခြေပြမြန်မာနိုင်ငံရေး သမိုင်း၊ ပထမတွဲ
မြန်မာဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ အခြေပြမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်း၊ဒုတိယတွဲ ပထမပိုင်း
အထက်မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန် သာသနာပြု သမိုင်း(၁၈၈၅-၁၉၁၈)
သိပံ္ပတက္ကသိုလ်သမိုင်းဌာနသို့၁၉၆၉ တွင် တင်သွင်းသည်ကျမ်း။
အတွေးအမြင်စာစဉ်(၄၅) မဟာဝိဇ္ဇာ ၁၉၈၉ ဇူလိုင်လ။
ချောင်းရိုးရွာ ခရစ္စယာန်တို့အားမှိုင်းမသောသခင်မ ဘုရားကျောင်းရာပြည့် အထိမ်းအမှတ်စာစောင်
ရွှေလက်ဝဲ အစုဘုရင်ဂျီတပ်မှုးနေမျိုးရွှေတောင် ကျော်သူဘွဲခံဆရာဝဲ အထုပတ္တိစာစောင်
မစ္စတာလော်ရီပေါလ် (မန္တလေး-စိန်ဇေးဗီးယားအုပ်စု)၏ မှတ်တမ်း။
Bigandet An outline of the History of the catholic Burmese mission from the year 1720 to 1887,Printed at Hanthawaddy press 1887.
Vivian Ba The early catholic missionaries in Burma .
The Guardian, Magazine
1962,1961.May. August, September, October,
1963 February, March, April, May.
1964, April, May, September.
Maung Kaung Beginning of christian Missionary in Burma(1600-1824)Jour Research Society.
Fernandez History of the catholic church in Burma
Usher Bishop The History of the catholic church in Burma.
Mandalay District Gazetteer Volum A.
Compilied by Mr.H.F.Searle Settlement office No.111 party 1928.
The little messenger 1950 Sept.Nov.
1954.Sept,Nov,printed at Rangoon.
1918 July, December. 1919 Feb 1920 May, July. 1924 Feb,October. 1925 Jan, March, Oct. 1926 March,April,May,June, July, August, September, Oct, Dec.
The list of missionaries of the society of foreign mission Pqaris in nothem Burma (1856-1926)
Baptism Record Chaung U.Ywa Daw.
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 12:10 AM
Fr. Joseph U Thet Lwin
ဖါသာရ်ဂျိုးဇက် ဦးသက်လွင်သည် (၁၉၆၅)ခု ဇန်န၀ါရီလ (၂၉)ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း ချောင်းဦးမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးညွှန့်မောင် ဒေါ်ခင်အေးတို့ဖြစ်သည်။ ချောင်းဦးမြို့ အထက်တန်းကျောင်းတွင် (၁၀)တန်းအောင်သည် အထိ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၈၆) မှ (၁၉၈၈) အထိ မုံရွာတက္ကသိုလ်တွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၈၈-၈၉) ခုနှစ်များတွင် ရှမ်းပြည်နယ် ကျေးသီမန်စန်ကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင် မူလတန်းပြဆရာအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ (၁၉၉၀)ပြည့်နှစ်တွင်
မန္တလေးတက္ကသိုလ်၌ ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၉၁)ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ (၁၉၉၂)ခုနှစ်တွင် ကိုရင် သင်္ကန်းရခဲ့သည်။ (၁၉၉၂-၁၉၉၄) နှစ်များတွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ် ဖီလော်ဆော်ဖီဌာနတွင် ဖီလိုဆိုဖီ ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးနောက် (၁၉၉၄) မှ (၁၉၉၈) အထိ ရဟန်းဖြစ် တက္ကသိုလ်တွင် သီအိုလိုဂျီပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။(၁၉၉၉) ခုနှစ် မတ်လ (၁၈) ရက်နေ့တွင် ချောင်းရိုးရွာ ဘုရားကျောင်း ရာပြည့်ပွဲတော်တွင် ဦးပဉ္စင်းကြီးသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ (၁၉၉၉)ခု အောက်တိုဘာလ(၈)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌ ဆရာတော်အေ ဦးသန်းအောင် လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် လက်ထောက်အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ (၂၀၀၂)ခုနှစ် ဂျွန်လမှ စ၍ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် ချင်းညောင်ပင်သာရွာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည်။ (၂၀၀၃)ခုနှစ် ဂျွန်လတွင် အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့သို့ ပညာ ဆက်လက်ဆည်းပူးရန် သွားရောက်ရသည်။
Fr. Philip U Tin Tun
ဖါသာရ် ဖီးလစ် ဦးတင်ထွန်းသည် (၁၉၆၂)ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၇)ရက်နေ့တွင် အမရပူရမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးသန်းဆောင် ဒေါ်ပုဖြစ်သည်။ အမရပူရမြို့ အလယ်တန်းကျောင်းတွင် သူငယ်တန်းမှ (၈)တန်းအထိ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၉)တန်းမှ (၁၀)တန်းအထိ အမရပူရမြို့ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၈၁) ခုနှစ် (၁၀)တန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၁)ခုနှစ်မှ စ၍ မန္တလေးဝိဇ္ဇာ သိပ္ပံတက္ကသိုလ်တွင် ပညာ ဆက်လက် ဆည်းပူးခဲ့ရာ (၁၉၈၅)ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
(၁၉၈၅) ခုနှစ်တွင် မေမြို့ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း တနှစ်ဝင်ရောက်ပြီး (၁၉၈၅)ခုနှစ်မှ (၁၉၉၁)ခုနှစ် အထိ မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်တွင် အစိုးရမူလတန်း ဆရာအဖြစ် (၅)နှစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ (၁၉၉၁)ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ စိန်သောမတ်စ်အကြို ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ် ပြန်ဝင်ပြီး (၁၉၉၂) မှ (၁၉၉၄) အထိ မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ် ဖီလော်ဆော်ဖီဌာနတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၄)ခုနှစ်မှ (၁၉၉၈)ခုနှစ် အထိ ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ် မေဂျာဆေမီနာရီတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၉) မတ်လ (၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ချောင်းရိုးရွာ ဘုရားကျောင်း ရာပြည့်ပွဲတွင် ဘရာသာဂျိုးဇက်သက်လွင်နှင့် အတူ ဦးပဉ္စင်းကြီး သိက္ခာခံယူခဲ့သည်။ (၁၉၉၉) ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၈)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင် လက်တော်မှ ရဟန်း သိက္ခာခံယူခဲ့သည်။
ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူပြီးနောက် စိန်သောမတ်အကြို ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်တွင် လက်ထောက် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် (၂၀၀၂)ခုနှစ် အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည့် အပြင် စိန်ဂျွန်းဘာသာဝင်များကိုလည်း ကြည့်ရှုရသည်။ (၂၀၀၂)ခုနှစ် ဂျွန်လမှစ၍ တောင်တွင်းကြီး သရက်ခုန် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးအဖြစ် အမှုထမ်းရသည်။ (၂၀၀၃) ဧပြီလမှစ၍ တောင်တွင်းကြီး၊ ညောင်ပင်သာ၊ သရက်ခုန်၊ သဲဖြူတို့ကိုပါ ကြည့်ရှုရသည်။ (၂၀၀၃)ခုနှစ် မတ်လတွင် တောင်တွင်းကြီး၌ ဘော်ဒါကျောင်းဆောင် ဆောက်ရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်မရသဖြင့် ရပ်ဆိုင်းထားရသည်။(၂၀၀၃) ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၂)ရက်နေ့တွင် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၌ မြေငလျင် ပြင်းထန်စွာလှုပ်သဖြင့် တောင်တွင်းကြီး၊ ညောင်ပင်သာ၊ သဲဖြူ သရက်ခုန် ဘုရားကျောင်းများ ပြိုကျ ပျက်စီးယိုယွင်းသွားသဖြင့် ပြန်လည် တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေရသည်။
Fr. Louis U Soe Lwin
ဖါသာရ် လူးဝစ်ဦးစိုးလွင်သည် (၁၉၆၈)ခု သြဂုတ်လ (၁၈)ရက်နေ့တွင် ရေဦးမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးတစ်ကူး - ဒေါ်မှုံတို့ဖြစ်သည်။ (၁၉၇၃) ခုနှစ်မှ စ၍ ရေဦးမြို့ အမှတ်(၁) မူလတန်းကျောင်းတွင် တတိယတန်းအထိ ပညာသင်ကြားပြီး ချမ်းသာရွာ အစိုးရမူလတန်းကျောင်းတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားရာ ချမ်းသာရွာ အစိုးရမူလတန်းကျောင်းမှ စတုတ္ထတန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ (၅) တန်းမှ (၇)တန်းအထိ ရေဦးအမှတ်(၁) အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားပြီး (၁၉၈၃)ခုနှစ်တွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းဝင်သည်။ မေမြို့ အမှတ်(၃) အ.ထ.ကတွင် (၈)တန်းမှ စတင် သင်ကြားရာ (၁၉၈၆)ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၇)ခုနှစ်တွင် မန္တလေး တက္ကသိုလ် စာပေးစာယူသင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၀) မှ (၁၉၉၁)တွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်တွင် ဖီလိုဆိုဖီ ပထမနှစ် ပညာရပ် သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၁) ခုနှစ်မှ စ၍ တက္ကသိုလ် စာပေးစာယူသင်တန်း ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ရာ (၁၉၉၄)ခုနှစ်တွင် ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ (၁၉၉၄)ခုနှစ်တွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ် ဖီလော်ဆော်ဖီ ဒုတိယနှစ်သင်ကြားခဲ့သည်။
(၁၉၉၅) ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် အီတလီပြည် ရောမရှိ (Mary Mother Of The Church) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်တွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားပြီး (၁၉၉၉)ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၂)ရက်နေ့တွင် ရောမမြို့၌ ဦးပဉ္စင်းကြီးသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။(၂၀၀၀)ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ (၇)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ်ကျောင်း၌ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော် အေဦးသန်းအောင် လက်တော်မှ ရဟန်း သိက္ခာခံယူခဲ့သည်။
ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့ လက်တေရန်တက္ကသိုလ်၌ (Pastoral Theology) ပညာရပ်ကို ဆက်လက်လေ့လာ သင်ကြားခဲ့ရာ (၂၀၀၃)ခုနှစ်တွင် (Ph.D) ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ (၂၀၀၃)ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၄)ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာပြီး တောင်တွင်းကြီးခရိုင် သရက်ခုန်ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ်နှင့် သရက်ခုန်၊ ကုက္ကိုကုန်း၊ ပတ်လည်ကြီးရွာများရှိ ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုရသည်။
င်္Fr. Anthony U Aung Myo Win
ဖါသာရ်အန်ထော်နီ ဦးအောင်မျိုးဝင်းသည် (၁၉၆၉)ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၁၃)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးအောင်သိန်း ဒေါ်သောင်းတို့ဖြစ်သည်။ မန္တလေးမြို့ အမှတ်(၅)ဘုံကျော် အလယ်တန်းကျောင်းတွင် သူငယ်တန်းမှ အဌမတန်းအထိ သင်ကြားပြီးနောက် မန္တလေးမြို့ အမှတ်(၁၃) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့၍ န၀မတန်းမှ စတင်သင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၈၇)ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်း အောင်ခဲ့သည်။ (၁၀)တန်းအောင်ပြီးနောက် မန္တလေးမြို့ ရတနာပုံကောလိပ်တွင် ပထမနှစ် တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၈၈)အရေးအခင်းနှင့် ကြုံခဲ့ရသည်။ (၁၉၈၈) ခုနှစ်တွင် မေမြို့ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၀)ပြည့်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်စာမေးပွဲ ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ပြီး၊ ဒုတိယနှစ်မှစ၍ တက္ကသိုလ် စာပေးစာယူသင်တန်းတက်ခဲ့ရာ (၁၉၉၄)ခုတွင် သိပံ္ပဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ (၁၉၉၅-၉၆)တွင် မေမြို့တွင် (၂)နှစ် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
(၁၉၉၇) ခုနှစ်တွင် အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့ရှိ စိန်ဂျွန်လက်တေရန် တက္ကသိုလ်တွင် ဖီလိုဆိုဖီ (၂)နှစ် သီအိုလိုဂျီ (၃)နှစ်သင်ကြားပြီး (၂၀၀၂) ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၂)ရက်နေ့တွင် အီတလီပြည် ရောမမြို့၌ ဦးပဉ္စင်းကြီးသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ (၂၀၀၂)ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ကာသီဒရယ်ဘုရားကျောင်း၌ ဆရာတော် ချားစ်လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် ချောက်မြို့ လက်ထောက် ဘုန်းကြီးအဖြစ် အမှုထမ်းရသည်။
င်္Fr. Bosco U Kyaw Tun Myint
ဖါသာရ်ဘော်စကို ဦးကျော်ထွန်းမြင့်သည် (၁၉၇၀)ပြည့်နှစ် မေလ (၁၆)ရက်နေ့တွင် မုံလှရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးနီ ဒေါ်သိန်းကြည်တို့ ဖြစ်သည်။ အသက် (၅)နှစ်အရွယ်တွင် ချောင်းဦးမြို့ ဘုရင်ဂျီရပ်ရှိ အစိုးရမူလတန်းကျောင်းတွင် စတုတ္ထတန်းအထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၅)တန်းမှ (၁၀)တန်းအထိ ချောင်းဦးမြို့ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၉၀)ပြည့်နှစ်တွင် (၁၀)တန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၂)ခုနှစ်တွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၃)ခုနှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ စိန်သောမတ်စ်အကြို ရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှ တက္ကသိုလ် စာပေးစာယူသင်တန်း တက်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ရာ (၁၉၉၆)ခုနှစ်တွင် သမိုင်းဘာသာရပ် အဓိကဖြင့် ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ရရှိသည်။
(၁၉၉၆) ခုနှစ်မှ (၁၉၉၈)ခုနှစ် အထိ မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ်တွင် ဖီလော်ဆော်ဖီ ပညာရပ်သင်ကြားခဲ့ပြီး (၁၉၉၈) ခုနှစ်မှ (၂၀၀၂) ခုနှစ် အထိ ရန်ကုန် မေဂျာရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် သီအိုလိုဂျီ ဘာသာရပ် သင်ကြားခဲ့ရသည်။ (၂၀၀၂)ခု ဧပြီလ (၅)ရက် နဘက်ရွာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ရာပြည့်ပွဲတော်တွင် ဦးပဉ္စင်းကြီး သိက္ခာခံယူခဲ့သည်။ (၂၀၀၂)ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒရယ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌ ဆရာတော်ချားစ်ဘို၏ လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် ချမ်းသာရွာ လက်ထောက် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည်။
Fr. Peter U Sein Hlaing U
ဖါသာရ်ပီတာ ဦးစိန်လှိုင်ဦးသည် (၁၉၇၃)ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ ဦးစိန်မောင်နှင့် ဒေါ်ခင်လေးတို့ဖြစ်သည်။ နောင်လှိုင် အစိုးရမူလတန်းကျောင်းတွင် သူငယ်တန်းမှ စတုတ္ထတန်းအထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၅)တန်းမှ(၈)တန်းအထိ မန္တလေးမြို့ အမှတ်(၇) အလယ်တန်းကျောင်းတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး န၀မတန်းတွင် အမှတ်(၁၄) အထက်တန်းကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့၍ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၈၉) ခုနှစ်တွင် မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်ရောက်၍ မေမြို့ အမှတ်(၃)အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းတွင် (၁၀)တန်းပညာ ဆက်လက်သင်ကြားရာ ထိုနှစ်မှာပင် (၁၀)တန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။(၁၉၉၀) ပြည့်နှစ်တွင် မန္တလေးမြို့ အကြိုရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ် စိန်သောမတ်စ်ရဟန်း ဖြစ်သင်ကျောင်းမှ စာပေးစာယူသင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့ရာ (၁၉၉၅)ခုနှစ်တွင် သိပ္ပံဘွဲ့ ရရှိ်ခဲ့သည်။
(၁၉၉၆) ခုနှစ်မှ (၁၉၉၈)ခုနှစ် အထိ မေမြို့ရဟန်းဖြစ်သင်တက္ကသိုလ် ဖီလိုဆိုဖီပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၉၈) ခုနှစ်မှ (၂၀၀၂)ခုနှစ် အထိ ရန်ကုန် မေဂျာရဟန်းဖြစ်သင် တက္ကသိုလ်တွင် သီအိုလိုဂျီပညာ ဆက်လက် သင်ကြားခဲ့သည်။ (၂၀၀၂) ဧပြီလ (၅)ရက်နေ့ နဘက်ရွာ ရာပြည့်ပွဲတော်တွင် ဦးပဉ္စင်းကြီးသိက္ခာ ရရှိခဲ့သည်။ (၂၀၀၂) ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁၀)ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ ကာသီဒရယ်ဘုရားကျောင်းတော်တွင် ဆရာတော် ချားစ်ဘို၏ လက်တော်မှ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ ရဟန်းသိက္ခာခံယူပြီးနောက် ကန့်ဘလူ၊ ကျွန်းလှ၊ ကောလင်းမြို့များရှိ ဘာသာဝင်များကို ရွှေဘိုကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး၏ လက်ထောက်အဖြစ် တာဝန်ယူ ကြည့်ရှုခဲ့ရသည်။ (၂၀၀၃)ခုနှစ် မေလ (၁၆)ရက်နေ့တွင် ရွှေဘိုကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး၏ လက်ထောက်အဖြစ် မုံလှရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး ဘာသာဝင်များကို ကြည့်ရှုရသည်။
Brother Alexis U Mg Mg Htay
ဦးပဉ္စင်းကြီး ဦးမောင်မောင်ဌေးသည် (၁၉၆၁)ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၆)ရက်နေ့တွင် ချောင်းရိုးရွာတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖများမှာ ဦးဒီနုူး ဒေါ်တင်တင်တို့ဖြစ်သည်။ တန့်ဆည်တွင် ပဉ္စမတန်းအထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၇၂) ခုနှစ်တွင် မေမြို့ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း ၀င်သည်။ (၆) တန်းမှ (၈)တန်းအထိ မေမြို့ အမှတ်(၁)အ.လ.ကတွင် ပညာသင်ကြားပြီး န၀မတန်းနှင့် ဒဿမတန်းကို အမှတ်(၂)အထကတွင် သင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၇၈) ခုနှစ်တွင် (၁၀)တန်းအောင်သည်။ (၁၉၇၉)ခု မှ (၁၉၈၂)အထိ ရန်ကုန် မေဂျာဆေမီနာရီတွင် ဖီလော်ဆော်ဖီ သင်ကြားရင်း တက္ကသိုလ် စာပေးစာယူ တက်ရောက်ခဲ့ရာ သိပ္ပံဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး သီအိုလိုဂျီ ပညာသင်ကြားခဲ့ရာ (၁၉၈၆)တွင် ပြီးဆုံးခဲ့သည်။
(၁၉၉၂) ခုနှစ်တွင် ဦးပဉ္စင်းကြီး သိက္ခာယူပြီးနောက် (၁၉၉၂) မှ (၂၀၀၁)အထိ စိန်ဇေးဗီးယားကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးကို ကူညီခဲ့သည်။ (၂၀၀၂) ခု မေလမှ စ၍ မေမြို့ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည်။
င်္Fr. Charles Bo
ဖါသာရ် ချားလ်စ်ဘိုသည် (၁၉၄၈)ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၉)ရက်နေ့တွင် ရွှေဘိုခရိုင်၊ ခင်ဦးမြို့နယ်၊ မုံလှရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိဖနှစ်ပါးမှာ ဦးဂျွန်နှင့် ဒေါ်အေးတင်တို့ဖြစ်သည်။ မူလတန်းပညာကို မုံလှရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင် သင်ကြားပြီးနောက် (၁၉၆၂)ခုနှစ် မှ (၁၉၇၆)ခုနှစ် အထိ အနီးစခန်းရှိ
နာဇရက်ဆလေးရှင်း ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းတွင် ဆက်လက် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ (၁၉၇၆) ခု ဧပြီလ (၉)ရက်နေ့တွင် လာရှိုးမြို့၌ ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည်။ (၁၉၇၆)ခု မှ (၁၉၈၁)ခုနှစ်အထိ Loikhan တွင်ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၈၅) မှ (၁၉၈၆) အထိ Apostolic Administrator Lashio လားရှိုး သာသနာအုပ်ချုပ် စီမံခန့်ခွဲရေးမှုး အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်။ (၁၉၈၆) မှ (၁၉၉၀) အထိ (Prefeat Apostolic of Lashio) လားရှိုးသာသနာ တာဝန်ခံ အကြီးအမှုး မွန်ဆီညော်အဖြစ် တာဝန်ယူရသည်။ (၁၉၉၀) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၆)ရက်နေ့တွင် လားရိူးသာသာနာ ဆရာတော်အဖြစ် လားရိူးမြို့တွင် ဆရာတော်သိက္ခာခံယူခဲ့သည်။ (၁၉၉၆) ခု သြဂုတ်လ (၂)ရက်နေ့ မှ စ၍ ပုသိမ်ဆရာတော် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရသည်။ (၂၀၀၂)ခုနှစ် ဧပြီလ (၃)ရက်နေ့မှ စ၍ (၂၀၀၃)ခုနှစ် ဂျွန်လ (၁၄)ရက်နေ့အထိ မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ် သာသနာအုပ်ချုပ် စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်။
ဆရာတော်ချားလ်စ်ဘိုသည် မန္တလေးဂိုဏ်းချုပ်သာသနာကို အုပ်ချုပ်စီမံနေရစဉ် ဆရာတော် အဆက်ဆက် သီတင်းသုံးနေထိုင်ရန် အတွက် မန္တလေးမြို့ ၈၁x၂၅လမ်း၊ ၈၁လမ်းကို မျက်နှာမူလျက် သုံးထပ် ဆရာတော်ကျောင်းတိုက်သစ်ကို (၂၀၀၂)ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၉)ရက်နေ့တွင် အင်ဂျင်နီယာ ဦးမောင်မောင်ဦးစီး၍ အုတ်မြစ်ချ တည်ဆောက်ခဲ့ရာ (၂၀၀၃)ခု ဂျွန်လတွင် ပြီးစီးခဲ့သဖြင့် (၂၀၀၃)ခုနှစ် ဂျွန်လ (၁၄)ရက်နေ့တွင် ဆရာတော် ကျောင်းသစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ ဆရာတော်ကျောင်းတိုက်သစ် ဖွင့်ပွဲကို ရဟန်းမင်းကြီးကိုယ်စားလှယ်တော် ဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော် Adriano Bernardini ကိုယ်တိုင် တက်ရောက် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ ဆရာတော်ကျောင်းတိုက်သစ်၏ ကုန်ကျငွေ စုစုပေါင်းမှာ ကျပ် (၈၄၄၄၆၆၀၇) (ကျပ်ရှစ်ရာလေးဆယ့်လေးသိန်းလေးသောင်းခြောက်ထောင်ခြောက်ရာ ခုနှစ်ကျပ်တိတိ) ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော် ချားလ်စ်ဘိုသည်(၂၀၀၃) ဂျွန်လမှစ၍ ရန်ကုန်ကက်သလစ် သာသနာဂိုဏ်းချုပ် ဆရာတော်အဖြစ် တာဝန်ယူ အမှုထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 11:43 PM